Ergadii Madaxweyne Ku xigeenka Somaliland hoggaaminayay ee nabadaynta oo gaadhay Ceel-afweyn | Berberanews.com
Home WARARKA Ergadii Madaxweyne Ku xigeenka Somaliland hoggaaminayay ee nabadaynta oo gaadhay Ceel-afweyn
Ergadii Madaxweyne Ku xigeenka Somaliland hoggaaminayay ee nabadaynta oo gaadhay Ceel-afweyn
Ceel-afweyn(Berberanews):- Ergo Culus oo uu hoggaaminayo Madaxweyne Ku-xigeenka Somaliland, ayaa Gaadhay degmada Ceel-afweyn ee gobolka Sanaag oo ay ku wadahadashiin doonaan Beelo halkaas ku diriray.
Sidaa waxa lagu sheegay War Qoraal ah oo ka soo baxay Xafiiska Warbaahinta Madaxtooyada Somaliland, Nuqul ka mid ah Warkaas oo Berberanews.com soo gaadhay gelinkii dambe ee Isniintii maanta, waxa uu u dhignaa sidatan:-
“Madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Somaliland, mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil (Saylici) ayaa gaadhay magaalada ceel-afweyn ee gobolka Sanaag,halkaas oo ay laba beelood ku dhexmaraysay muddooyinkii u danbeeyey colaadaad gaamurtay oo deegaankaasi ka taagnayd.
Wasiirka Arrimaha Guddaha Somaliland, Mudane Maxamed Kaahin Axmed iyo salaadiin tiro badan ayaa madaxweyne ku-xigeenka kusoo dhaweeyay magaalada ceel-afweyn.
Madaxweyneku-xigeenka ayaa kulan ballaadhan la qaatay madax dhaqameedkii ka kala yimi guud ahaan gobolada Somaliland ee nabadgelyada u joogay Ceel-afweyn, waxaanu Madaxweyne Ku-xigeenku halkaas Odayaasha Dhaqanka uga jeediyey Hadal kooban oo uu ku sharraxay ujeeddada Socdaalka Ergada uu hoggaaminayo iyo muhiimadda Nabadgelyadu nolosha Aadamaha u leedahay.
“Arrinta aynu u soconaa waa arrin nabad-galyo,waxaynu u baahan nahay in wax kasta oo ay inagu qaadanayso aynu nabadgelyo dhex-dhigno dadka walaalaha ah ee deegaankan, waa dad walaalo ah oo aanay waxba u kala soocnaynayn, hadana waa nasiib daro dagaalka dhex marayaa, hawshaas waxaynu u galaynaa sida ugu fiican.”
Sidoo kalana waxa uu Madaxweyne ku-xigeenku kulan la yeeshay culimada ugu caansan gayiga Soomaalidu degto oo magaalada ceel-afweyn u jooga sidii ay u xoojin lahaayeen dadaalada nabadgelyo ee ay xukuumadda Jamhuuriyadda Somaliland ka waddo deegaanadaas, culimada ayaa ballan qaaday inay si daacada u gali doonaan hawlaha nabadaynta deegaankaasi.” Sidaa ayaa lagu yidhi Warka qoraalka ah ee Madaxtooyada naga soo gaadhay.
Previous articleHay’adda caalamiga ah ee ICG oo Somaliland iyo Puntland ku eedaysay inay diideen Dublamaasiyadii Qarammada Midoobay
Next articleGuddoomiyaha Golaha Wakiillada iyo Taliyaha Ciidanka Somaliland oo gaadhay Tukaraq